Hibaaq Abuukar oo ka tirsaneyd xafiiska ra’iisul wasaare Rooble oo ku dhimatay Qaraxii saakay iyo Rooble oo ka hadlay.. | Dayniile.com
Home Warkii Hibaaq Abuukar oo ka tirsaneyd xafiiska ra’iisul wasaare Rooble oo ku dhimatay...
Hibaaq Abuukar oo ka tirsaneyd xafiiska ra’iisul wasaare Rooble oo ku dhimatay Qaraxii saakay iyo Rooble oo ka hadlay..
Waxaa soo kordhaya qasaaraha ka dhashay Qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana jira Saraakiil ka tirsan Xafiiska Raisal Wasaaraha oo ka mid ahayd dadkii halkaas ku dhintay.
Wararka ayaa sheegaya in Hibaaq Abuukar oo ka tirsaneyd xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ay ka mid Noqotay dadkii ku geeriyooday qaraxii is-miidaaminta ee maanta ka dhacay isgoyska Ceelgaabta.
Geerida Hibaaq ayaa waxaa xaqiijiyey afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimuu, oo qoraal uu soo dhigay facebook ku yiri “Ilaah ha u naxariisto Hibaaq Abuukar oo ka tirsaneyd xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo ka mid aheyd dadkii saaka ku dhintay weerar bahalnimo ah oo argagaxisadu ay ka sameeyeen bar koontorool oo ku taalla Isgoyska Ceel Gaab. Allaha u naxariisto dhamaan dadka aan waxba galabsan ee ku dhintay qaraxaasi fuleynimada ah.”
Sidoo kale ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhintay qaraxaas sida ay sheegeen saraakiisha amaanka ee Dowlada Soomaaliya.
Previous articleAfayeenka Ciidanka Boliiska oi faahfahin ka bixiyey Qaraxii ka dhacay afafka hore ee Madaxtooyada
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo ka hadlay Qaraxii saakay ka dhacay Ceelgaabta.
Dagaal kooban ayaa saakay mar kale Ciidanka dowladda Federaalka, kuwa Maamulka Galmudug iyo Ciidanka Ahlusunna Waljamaaca ku dhexmaray Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, xili...
Halkaan ka Daawo Ahmed Madoobe oo ka hadlay...
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka jawaabayay hadalkii galabta uu jeediyay Fiqi...
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Gudiga Taakulaynta dadka laga...